Bannaanbaxyo ka dhan ah Dil Dad Shacab ah Ciidanka Dowladdu u geysteen oo Muqdisho Gilgilay iyo Maamulka oo Ka Hadlay | Aftahan News
Bannaanbaxyo ka dhan ah Dil Dad Shacab ah Ciidanka Dowladdu u geysteen oo Muqdisho Gilgilay iyo Maamulka oo Ka Hadlay
Muqdisho(aftahannews):- Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa xalay illaa Sabtidii maanta ka socday Dibed-baxyo Dadweynuhu kaga soo horjeedaan laba Qof oo Shacab ah oo Ciidanka dowladda Askar ka tirsani ku dileen Muqdisho.
MUDDAHARAADYO MUQDISHO GILGILAY OO KA DHAN AH DIL CIIDANKA DOWLADDA SOMALILA DAD SHACAB AH U GEYSTEEN 2020.jpg
Dadka isu soo baxay ayaa codsaday in cadaaladda la horkeeno dadkii ku lugta lahaa dilka loo gaysta wiil dhalinyaro ah iyo haweenay umul ah.
Dhacdadaan oo aad looga argagaxay ayaa waxaa ay ka bilaabatay kadib markii shalay gelinkii dambe xiliga uu bilaabanayay bandwoga ay dowladdu soo rogtay dhawaan uu askari ka tirsan ciidamada dowladda ku amaray wiil dhalinyaro ah oo fadhiyay banaanka hurigiisa in uu gudaha galo balse ka caga jiiday.
Intaas kadib rasaas dhacday, ayaa la sheegay in uu ku dhintay wiilka dhaliyarada ahaa iyo gabar ka agdhaweyd. Dilkaasna waxaa ka dhashay Bannaan-baxyada ay Dadweynuhu kaga soo horjeedaan tallaabada Ciidanka.
Istar Cumar oo ka mid ah banaabaxayaasha ayaa BBC-da u sheegtay in ay dooneyso in adeerkeed oo khalad lagu dilay sida ay hadalka u dhigtay ninkii dilay la hor keeno cadaaladda.
“Waxaan rabaa adeerkey khalad ayaa loo dilay isagoon wax galabsan ayaa la dilay ninkii waxaan dhihi lahaa oo aderkay dilay in cadaaladda lagu qaado oo la dilo ayaan ka dalbanayaa dowladda ayay tiri Istar
“Dhab ahaantii waa wax qalbi jab leh, waxa maanta ka socda Muqdisho. Marar badan ayaa si cod dheer loogu celiyey in xiligii kali-taliska ee Soomaaliya uu yahay taariikh tagtay”, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan Sheekh o qporaal soo dhigay batiisa Twitter-ka.
Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Finish) ayaa intii ay socdeen dibaxyadu waxaa uu sheegay dadka in ay isdajiyaan isaga oo ugu lab qaboojiyay in askarigii falka dilka ah gaystay la qabtay loona qaaday xabsiga ,isaga oo intaas ku daray in isaga iyo cidii amartayba sharciga la hor keeni doono.
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya, ayaa xilkii ka qaaday Taliyihii Saldhigga degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho Najiib Carab,waxaanu xusay inay Bandooga laga dhigay bilawgeeda 8-da fiidnimo inta lagu jiro xaaladda ka hor-tagga iyo yaraynta Covid-19 oo Soomaaliya ku sii faafaya.